Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Yakatenderwa Kune Vana 5-11 yeEmergency
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Yakatenderwa Kune Vana 5-11 yeEmergency
Nhasi, US Food and Drug Administration yakabvumidza kushandiswa kwekukurumidzira kwePfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine yekudzivirira COVID-19 kusanganisa vana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe ekuzvarwa. Mvumo iyi yakavakirwa pakuongorora kwakanyatsojeka uye kwakajeka kweFDA data iro raisanganisira mapindiro kubva kune vakazvimiririra vekomiti yezano nyanzvi dzakavhota zvakanyanya vachitsigira kuti jekiseni riwanikwe kuvana vezera iri.
Pfungwa huru dzevabereki nevachengeti:
• Kubudirira: Mhinduro dzekudzivirira zvirwere zvevana 5 kusvika kumakore gumi nerimwe ezera dzaive dzakaenzaniswa nedzevanhu 11 kusvika kumakore makumi maviri nemashanu. Muchidzidzo ichocho, vaccine iyi yaive 16% inoshanda mukudzivirira COVID-25 muvana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe.
• Kuchengeteka: Kuchengetedzeka kwejekiseni iri kwakaongororwa muvana vangangoita 3,100 vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe vakawana mushonga uye hapana mhedzisiro yakaipa yaonekwa muchidzidzo chirikuitwa.
• VeCenters for Disease Control and Prevention's (CDC) Advisory Committee on Immunisation Practices vachasangana svondo rinouya kuti vakurukure mamwe mazano ekuchipatara.
“Saamai uye chiremba, ndinoziva kuti vabereki, vatarisiri, vashandi vechikoro, uye vana vakamirira mvumo yanhasi. Kudzivirira vana vadiki kubva kuCCIDID-19 kuchatiswededza pedyo nekudzokera kumamiriro ezvinhu," akadaro Acting FDA Commissioner Janet Woodcock, MD "Kuongorora kwedu kwakazara uye kwakasimba kwedata rine chekuita nekuchengetedzeka uye kushanda kwejekiseni kunofanirwa kubatsira kuvimbisa vabereki nevachengeti. kuti jekiseni iri rinosangana nemipimo yedu yepamusoro.”
Iyo Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine yevana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe ezera inopihwa seyekutanga-dose-dosi rekutanga, mavhiki matatu akaparadzana, asi idosi rakaderera (gumi mamicrograms) pane iro rinoshandiswa kune vanhu vane makore gumi nemaviri zvichikwira. (5 micrograms).
MuUS, nyaya dzeCCIDID-19 muvana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe ezera dzinoita makumi matatu nemapfumbamwe muzana ezviitiko muvanhu vari pasi pemakore gumi nemasere. Sekureva kweCDC, vangangoita zviuru zvisere nemazana matatu zviitiko zveCCIDID-5 muvana vane makore mashanu kusvika gumi nerimwe ezera zvakakonzera kuchipatara. Kubva Gumiguru 11, 39 vafa kubva kuCOVID-18 vanonzi muUS muvanhu vari pasi pemakore gumi nemasere, nekufa zana nemakumi mana nevatanhatu muboka remakore mashanu kusvika gumi nerimwe.
“FDA yakazvipira kuita sarudzo dzinotungamirwa nesainzi dzinogona kuvimbwa neveruzhinji nenharaunda yehutano. Isu tine chivimbo mukuchengetedza, kushanda uye kugadzira data kuseri kwemvumo iyi. Sechikamu chekuzvipira kwedu pakubuda pachena pakuita sarudzo, iyo yaisanganisira musangano wedu wekomiti yevanopanga mazano veruzhinji kutanga svondo rino, takatumira magwaro nhasi anotsigira danho redu uye rumwe ruzivo runotsanangura kuongorora kwedu data richatumirwa munguva pfupi. Tinovimba kuti ruzivo urwu runobatsira kuvaka chivimbo chevabereki vari kusarudza kuti vana vavo vabayiwe here,” akadaro Peter Marks, MD, Ph.D., mutungamiriri weFDA’s Center for Biologics Evaluation and Research.
Iyo FDA yakasarudza iyi yekudzivirira yePfizer yasangana nemaitiro emvumo yekushandiswa kwekukurumidzira. Zvichienderana nehwerengedzo yehumbowo hwesainzi huripo, zvinozivikanwa uye zvinogona kubatsira zvePfizer-BioNTech COVID-19 yekudzivirira muvanhu vanodzika kusvika pamakore mashanu ezera inodarika njodzi dzinozivikanwa uye dzinogona kuitika.